နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: စုံစီနဖာ အမှတ်စဉ် (မသိ/မမှတ်မိ ၀၂)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:39 AM
ချစ်ကြည်အေး June 6, 2010 at 12:05 PM
6.ဖဘ....ပုံတွေ သူတို့ယူသုံးလို့ရတာကို မသိဘူး
ဘုရား ဘုရား ငါ့ဓါတ်ပုံတွေ အမြန် ဖျက်ပစ်မှ...:P
khin oo may June 6, 2010 at 12:23 PM
နစ်.ဖုံးများကိုလည်းကန်ထရိုက်တစ်နစ်သာဖြစ်စေလိုသည်. my ဆုတောင်း.
သုံး. touch screen ကတော့ပိုမြန်ပုံဘဲ. ဆမ်ဆောင်းကအထနေးတယ်။
လေးး. download တွေများလို့ နေးသွားတာလည်းဖြစနိုင်သည်
ခြောက်။ ဖဘ သုံးတာလား ဆော့နေတာလား. ဖတ်နေတာလား. ရေးနေတာာလား. တင်နေတာလား. ဆိုတာကိ သေချာသူံးသပ်သင့်သည်. .
ခုနစ်. အသစ်များဖြစ်သွားကြောင်းထောက်ခံပါသည်. မကြာခဏရောက်သူတစ်ဦး.
ရှစ်. စာအုပ်ပြောင်းတိုင်းနံပါတ်အသစ်ပြောင်းသည် (မကြာခဏပြောင်းဘူးသူ)
ခွင့်သုံးရက် ဘုရားဘုရား ရှိတဲ့ခွင့်ကလေးကမှ လက်ချိုးရေလို့ရတယ်။
အကြံပြုလိုသည်မှာ qu န့ပါတ်ကို လူစားဖြင့်ယူနိုင်စေရန် ..ရုံးကိုစနေနေ့ဝက်ဖွင့်ရန်
ယခု ရန်ကုန်တွင် မော်တော်ကားလိုင်စင်အသစ်လုပ်ရာ စနေတွင် collection.only ပေးလုပ်ပါသည် အတော်အံသြသွားသည်။
ကိုး. အောင်မြင်ပါစေ. အောင်ရမည်. မုချ ဦးရန်အောင်.
ကလူသစ် June 6, 2010 at 1:30 PM
စုံစီနဖာထဲ ချစ်သူကို ထည့်ထားမှန်း သိများသိသွားရင် ဖလား ဖလား တွေးရဲဘူး။
Ko Boyz June 6, 2010 at 1:33 PM
ကလူသစ် မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်း မဖတ်တတ်သေးတာ သေချာသွားပြီ။
ချစ်သူကို စုံစီနဖာထဲ ထည့်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
လေတာပေါ့ ဆြာသစ်ရယ်...။ :P
TZA June 6, 2010 at 1:45 PM
၁၊ သားရေကွင်းနဲ့ပတ်ထားလည်း ထစရာမလိုပါ။
Ko Boyz June 6, 2010 at 1:47 PM
Unknown June 6, 2010 at 3:04 PM
နံပါတ် ၁ - အိပ်ခါနီး ရေထပ်သောက်ရင် မနက် အစော ထစရာလိုသည်
နံပါတ် ၂ - Apple ကို စားစရာ ပန်းသီးလို့ ပဲ သိထားသည်
နံပါတ် ၃ - ထိကရုံးပင်က ပိုပြီး စန်းစန့် တင့်ဖြစ်သည်
နံပါတ် ၄ - ဂျေးကိုမြင်တိုင်း ချန်ဂီပရီစင်ကိုပဲ ပြေးမြင်သည်
နံပါတ် ၅ - အ၀တ်လျှော်စက် တို့ နှင့်မဆိုင် သိရန်မလိုနှမတော်များသိသည်
နံပါတ် ၆ - မေ့ဘွတ် ဘာလို့ မရှိသလဲ စဉ်းစားမိသည်
နံပါတ် ၇ - အသစ် ဖြစ်၂ အဟောင်းဖြစ်၂ စိတ်ဓါတ်နဲ့အကျင့်သည် ပုံသေဖြစ်သည် ထို့ ကြောင့် သံရုံးဝန်ထမ်းအသစ်= သံရုံးဝန်ထမ်းအဟောင်း
နံပါတ် ၈ - အဆင့်မြင့်မြင့် တောင်းလို့ ကောင်းအောင် လုပ်ခြင်းသာဖြစ်သည် အီးပဲပြောင်း၂ ဇက်ပဲပြောင်း၂ တခြားနိုင်ငံသွားပါက ပြူးပြဲစစ်ခြင်းခံရမည်သာဖြစ်သည် ထို့ ကြောင့် ထူးမခြားနား ပတ်ပျိုးကို သတိယမိသည် လူများကို အလုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်သောကြောင့် သံရုံးဝန်ထမ်းများလည်း အလုပ်ရှုပ်ပင်ပန်းမည် ထို့ ကြောင့် အဏုမြူဗုံးအားဆေး တတောင့်စီ အားဆေးအဖြစ် လက်ဆောင်ပေးချင်စိတ် အလွန်တရာပေါက်မိသည်
နံပါတ် ၉ - ဖတ်ပြီး သံရုံးဝန်ထမ်းများကို မပေးခင် ကိုဘအား အရင်ဆုံး အဏုမြူဗုံးအားဆေး လက်ဆောင်ပေးချင်စိတ်အလွန် တထောင်ပေါက်မိသည်
နံပါတ် မရှိ- ထို့ ကြောင့် ယနေ့ ညနေ အားပါက အမ်အာတီမှာ ၄င်းလက်ဆောင်အား လာယူပါရန်
Rita June 6, 2010 at 3:49 PM
၁) ညဦးပိုင်းမှာ ရေအများကြီး မသောက်မိဖို့လည်း လိုတယ်
Rita June 6, 2010 at 3:51 PM
၂) (လက်ထဲက ဖုန်းကိုပဲ လွင့်ပစ်ရတော့မလိုလို)
အသံကောင်းဟစ်တာတွေကို မကြိုက်ဘူး။ လက်တွေ့လုပ်ပြ။
Rita June 6, 2010 at 3:53 PM
၃) တအိုင်တည်း အိုင်နေတဲ့ အနားကလူတွေကြောင့်ကို အိုင်ဖုန်းမကိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိတယ်။
Rita June 6, 2010 at 3:55 PM
၄) Jail Break ဆိုရင် ကိုယ်ကတော့ review ကို အလွတ်တောင် ရလုမတတ်ဖြစ်နေတဲ့ Shawshank Redemption ပဲ ကြည့်ချင်လာတတ်တယ်။
Rita June 6, 2010 at 3:56 PM
၅) သူ့သက်တမ်းက ဘယ်လောက်ရှိတာလဲ။ ဘယ်နေရာမှာ ကြည့်ရမှာလဲ။
info ကို စုံစုံလင်လင် ပေးပါ။
Rita June 6, 2010 at 3:58 PM
၆) fb ရှိကို မရှိရင် အကောင်းဆုံးပဲ။ လိုက် check ရတဲ့ တနေရာ လျော့သွားလည်း မနည်းဘူး။
Rita June 6, 2010 at 4:00 PM
၇) စိတ်မဝင်စား။ အေးဂျင့်နှင့်သာ အလုပ်လုပ်သည်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး အောက်ကျို့ရလျှင် အသက် တိုနိုင်သည် ထင်၏။
Rita June 6, 2010 at 4:03 PM
၈) အဲဒီကိစ္စအတွက်ရော အေးဂျင့်နဲ့ လုပ်လို့ မရဘူးလား။ ရေးထားတာ ကြည့်ရတာ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ်ဆို ခွင့် ၃ ရက် ယူရမယ့်ပုံပဲ။ ရုံးက မေးလိမ့်မယ်။ 'သံရုံးကိစ္စ ၃ ရက်ကြာအောင် လုပ်ရအောင် မင်းက သံအမတ်လားလို့'
Rita June 6, 2010 at 4:17 PM
သက်ဝေ June 6, 2010 at 4:18 PM
နံပါတ် ၉ - Blind Shot ပါကွယ်...း))
Ko Boyz June 6, 2010 at 4:49 PM
အပင်မြင့်လို့ လေတိုက်တာတွေကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်လုပ်သွားတယ်။
အေးဂျင့်နဲ့ လုပ်ရင်လဲ လက်ဗွေကို အေးဂျင့်က အငှားနှိပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အနည်းဆုံး ခွင့်တစ်ရက်ကတော့ မယူမနေရ ယူရမယ် ထင်ပါတယ်။
မောင်မောင် June 7, 2010 at 3:57 AM
နောက်ဆုံး အချက်က လက်ပံသားဓါးနဲ့ချိုင်တာပဲ။
ချစ်သူတွေ့ ယင်တော့ လား နံပါတ် ၁ မှာ မထားလို့စိတ်ဆိုးရချေသေးရဲ့ ။
ကြုပ်ကျပ်လိပါ ကိုဘွိုင်း ရေ
Steve Evergreen June 7, 2010 at 5:12 AM
နင်က ချစ်သူလွမ်းတယ်ပြောရအောင် နင့်ချစ်သူက ဘယ်မှာမှို့လဲ
ကင်းမွန် June 7, 2010 at 6:53 PM
ရွှေဘခံနေရတာ ခဏပါ။ တစ်ဆိပ်လေးသီးခံပေးကြပါ။
မကြာခင် ရွှေဘကပြန်ချ... အဲလေ သေတော့မှာပါ www
ဘာဘဲပြောပြောဗျာ၊ computer code နဲ့ passportကိုင်ရမှာဆိုတော့ ပြည်မြန်မာသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရင်ခုန်မိသား ။
အမြဲတမ်းလက်ရေးp.port ဆိုတော့လေဆိပ်တွေမှာ အထူးဆန်းလုပ်ခံရတာထက်တော့ ၂ပတ်လောက်သည်းခံလိုက်ရတာပိုကောင်းသလားလို့ ww
Myint Ko August 1, 2010 at 9:41 AM
၁။ TZA-၏ နည်းနှင့် ခွေးလေးတွေကို စမ်းကြည့်ဖူးသည်။ တစ်လလောက်ကြာတော့ Ok သွားသည်။ သူ့အတွက် တော်သလင်း ဒုက္ခ မရှိတော့။
၂။ လွင့်ပစ်ချင်ရင် အသိပေးပါ။( လိုက်ကောက်ရန်)
၃။ App စုံစုံ မစုံစုံ အိုက်ပက်ကို ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားနေသည်။
ကျန်တာတွေ မသိသေး။ (ကျေးဇူး နဲနဲ တင်ပါသည်။)